१११ पशुपँक्षीको आवाज निकाल्ने अचम्मका नेपाली ! जस्ले बोलाउँदा हात्तीदेखि बाघसम्म दौडेर आउँछ (भिडियो हेर्नुस) – सुदूरखबर डटकम
१११ पशुपँक्षीको आवाज निकाल्ने अचम्मका नेपाली ! जस्ले बोलाउँदा हात्तीदेखि बाघसम्म दौडेर आउँछ (भिडियो हेर्नुस)
चितवनका सौराहामा जन्मिएका मिलन गोदार क्षेत्रीसँग अचम्मको कला छ । लामो समय जँगलमै बिताएका मिलन १११ थरी पशुपँक्षीहरुको हुबुहु आवाज निकाल्छन् । उनीहरुकै आवाजबाट पशु पँक्षीहरुलाई बोलाउने अचम्मको खुशी भएका मिलनको यो कला देख्दा सबै अचम्मित छन् । उनलाई हरेक पशुपँक्षीका बारेमा धेरै भन्दा धेरै ज्ञान छ ।
गिनिज वल्र्ड रेकर्डमा धेरै पशु पँक्षीहरुको आवाज निकालेर रेकर्ड राख्ने सोचमा रहेका मिलनले बोलाउँदा हात्ती देखि अन्य वीवजन्तु पनि आउने गरेको उनको ठोकुवा छ । आउनुहोस, मिलन गोदारले कसरी हात्ती देखि बाघसम्म बोलाउँछन् त ? हेरौ यो भिडियो